Fairchild C-123 K Provider Package for FS2004
Ny andiany faha-3 amin'ny fitaterana angano - veteranin'ny adin'i Vietnam fantatra amin'ny sarimihetsika "Air America" ​​(M.Gibson & R.Downey). Ao amin'ny kinova vaovao ny modely hita maso niova tanteraka miaraka amin'ny sarimiaina ataon'ny mpanamory sy ny sarimiaina amin'ny alàlan'ny famoahana entana. VC voahodina tanteraka - miasa tanteraka ny levers sy ny sary miaina animations dpi avo lenta, mpiara-miasa pilotam-panahy tanteraka. Panel. Firafitra 3 - Air America, FAV, USAF (camo). Moa ve ampiana effets 4 namboarina - filatsahan'ny boaty enta-mavesatra, kisoa mitete miaraka amin'ny parachute (tadidio ny sinema?), Fanombohana motera ary vokatry ny vovoka mihetsika eny amin'ny seranam-piaramanidina ambanin'ny tany.Detailed fampianarana ny fametrahana dia enclose (ReadMe.doc).